AMANZI AMANZI, Siklama, sikhiqize futhi sinikeze amathuluzi nezinhlelo zekhwalithi ephezulu ZOKWELASHWA KWAMANZI amachibi okubhukuda okuthengisa, izikhungo kanye nezinsiza zamanzi zomphakathi kanye nezici zamanzi.
Sinesipiliyoni seminyaka engu-25 sokukhiqiza imishini yokuhlanza amanzi. Ifekthri yethu eseShayina ibigxile ekuthuthukisweni kwemikhiqizo yokuhlanza amanzi ethuthuke kakhulu, ewonga amandla, ehambisana nemvelo, kanye neyonga imali.
Ibhizinisi lethu langaphakathi lihlanganisa imishini yokuhlunga amanzi, okokubulala amagciwane, okokushisa kanye nemishini yokushisa engashintshi, imishini ye-spa neminye iminyango. Imikhiqizo esekelayo ekhiqizwa yile minyango ilethwa endaweni yephrojekthi ehambisanayo ngokwezidingo zethu zephrojekthi, futhi ifakwe futhi yakhiwe ngaphansi kokuqondisa kwethimba lethu lochwepheshe.
Isistimu Yokuhlanza Amanzi Yamachibi Okubhukuda, Izipa, I-Landscape Yamanzi kanye Nepaki Yamanzi
Uhlelo lokujikeleza kwamanzi echibini
Iphampu ye-swimming pool iwumgogodla wesistimu yokwelapha amanzi echibini lokubhukuda.
Amanzi ampontshelwa ngaphandle kwechibi, adlule ohlelweni lokuhlunga kanye nokwelashwa ngamakhemikhali, bese ebuyela ngokuqhubekayo echibini ukuze kuqinisekiswe ukuthi akukho ukungcola, udoti namagciwane echibini.
Amaphampu edamu lokubhukuda ECHIBI ELIKHULU afanele amachibi okubhukuda awo wonke amasayizi nezinhlobo, kusukela emachibini okubhukuda amancane azimele ukuya emachibini okubhukuda anosayizi omkhulu wama-Olympic.
Zitholele kabanzi mayelana ne-GREATPOOL's Circulation Systems yokwelashwa kwamanzi ephuli
Isistimu yokuhlunga yephuli
Isistimu yokuhlunga eklanywe kahle izosiza ekuqinisekiseni amanzi acacile echibini lakho lokubhukuda.
Isihlungi sedamu lokubhukuda LE-GREAT POOL siklanyelwe ukuhlanza ukungcola nezinye izinsalela ezincane emanzini, futhi singasiza ekunciphiseni ukukhula kwamagciwane nolwelwe.
I-GREAT POOL ingumholi womhlaba kubuchwepheshe bokuhlunga obuthuthukile futhi inohlu olubanzi kakhulu lwezihlungi zamachibi okubhukuda; kusukela kuzihlungi ze-cartridge ezilula ukuya kuzihlungi zesihlabathi kanye ne-diatomaceous earth (DE).
Zitholele kabanzi mayelana ne-GREATPOOL's Filtration Systems yokwelashwa kwamanzi echibini
Uhlelo lokukhipha amagciwane emanzini
Izibulala-magciwane zisetshenziselwa ukubulala noma yiziphi izinambuzane ezincane ezisele emanzini; kuyingxenye eyinhloko yenqubo yokwelashwa kwamanzi ngoba amagciwane amaningi angaba yingozi empilweni yomuntu.
I-Chlorine ne-bromine disinfection
Isixazululo esaziwa kakhulu nesivamile sokubulala amagciwane emanzini okubhukuda. I-Chlorine ne-bromine iphumelela kakhulu ekubulaleni ama-microorganisms, kodwa idinga ukulawulwa ngokucophelela. Wonke amasistimu okwelapha e-GREAT POOL chlorine aklanywe ngendlela elula futhi ephephile kubasebenzisi bamachibi.
Kuyindlela ethandwa kakhulu, ikakhulukazi kumachibi okubhukuda. I-ozone isebenzisa ama-athomu omoya-mpilo ukubhubhisa ama-microorganisms ngokusebenzisa i-oxidation. Uma kuqhathaniswa nezinhlelo zokubulala amagciwane ezisekelwe ku-chlorine ne-bromine, i-ozone inezinzuzo eziningi. I-ozone ayikwazi nje ukubulala amagciwane emanzini, kodwa futhi isuse izinsalela zamakhemikhali emanzini echibi. Lezi zinsalela zamakhemikhali zingabangela ukuthuthumela emanzini, zikhiqize iphunga lamakhemikhali, futhi zicasule isikhumba namehlo.
Ngokusebenzisa amaza e-ultraviolet, amabhaktheriya awasebenzi futhi awabi yingozi. Lolu hlobo lobuchwepheshe lunezinzuzo eziningi zesistimu ye-ozone, kodwa aludingi ukulawula umthamo ngoba awekho amakhemikhali ahilelekile.
Zitholele kabanzi mayelana ne-GREATPOOL's Disinfection Systems yokwelashwa kwamanzi
Zitholele kabanzi mayelana ne-GREATPOOL's Heating and Dehumidification Systems zokwelashwa kwamanzi ephuli
Amasistimu wokushisisa kanye nokunciphisa umswakama
Umgomo wethu uwukunikeza isisombululo esingcono kakhulu sokushisisa nokususa umswakama endaweni yakho yokubhukuda nokuthi ulisebenzisa kanjani
Njengomkhiqizi, I-GREAT POOL iyaziqhenya ngokukwazi ukuhlinzeka ngezixazululo ezihlukahlukene zokukhethwa kwakho kokuthi ushisisa kanjani ichibi lokubhukuda.
Isimiso sokusebenza sokushisa kwechibi lokubhukuda elanga ukusebenzisa amandla amahhala elanga ukushisa amanzi ajikelezayo futhi uwabuyisele endaweni yokubhukuda lapho izinga lokushisa liphakeme.
Izishisi zikagesi zokubhukuda, ezaziwa nangokuthi amaphampu okushisa, zisebenza ngokuletha amanzi ethangini lokufudumeza bese zimpompa amanzi afudumele ziwabuyisele endaweni yokubhukuda. Ukushintshashintshana njalo kokushisa nokubanda kugcina ichibi lakho lokubhukuda lifudumele. Kunezinhlobo ezimbili zama-heaters kagesi; umthombo wamanzi nomthombo womoya. Nakuba kokubili kusebenza ngokufanayo, izifudumezi zomthombo wamanzi zidlulisa ukushisa kusuka emthonjeni wamanzi kuya emanzini akho echibi lokubhukuda, kuyilapho izifudumezi zomthombo womoya zisebenzisa ukushisa okuvela emoyeni.
Amaphampu okushisa aya ngokuya aduma ngenxa yomthelela wawo ophansi kwezemvelo kanye nokusebenza kahle kwamandla okuphakeme uma kuqhathaniswa. Ama-heaters amanzi epompo yokushisa angasebenza ezindaweni ezingafanele ukushisisa amanzi elanga
I-Sauna kanye nesistimu ye-SPA
Kokubili isitimu nesauna zilungele impilo engokomzimba nengqondo.
Vumela i-GREATPOOL ilungiselele noma wenze ngendlela oyifisayo uhlelo lwegumbi le-sauna ngokuya ngephrojekthi yakho kungaba yisinqumo esingcono kakhulu. Zombili zinikeza ukuguquguquka okukhulu nokufaka kalula.
Zitholele kabanzi mayelana ne-GREATPOOL's Sauna kanye nemishini ye-SPA
Imishini yepaki yamanzi
Lezi zakhiwo eziqanjiwe neziklanywe kahle zinikeza amathuba okudlala athokozisayo nacabangayo kuwo wonke umuntu, kungakhathaliseki ukuthi izingane noma abantu abadala, ukusebenzisana namanzi. I-Great POOL idizayina futhi ihlinzeka ngezixazululo ezimangalisayo zepaki yamanzi ngokwezidingo zakho.
Thola kabanzi mayelana nesixazululo se-GREATPOOL's Waterpark
Impahla ye-swimming pool kanye nezinhlelo ezikhiqizwa futhi zihlinzekwa yi-GREATPOOL zithengiswa emhlabeni wonke ngenethiwekhi yama-ejenti, abakhi, abasabalalisi nosonkontileka abangochwepheshe. Bakhetha ngokucophelela futhi bafake imikhiqizo yethu, izinto zokusebenza namasistimu ethu. Umgomo wethu uwukwenza imikhiqizo yethu isebenze kumachibi okubhukuda, izindawo zokungcebeleka kanye nezindawo zamanzi, kungakhathaliseki ukuthi ukwakhiwa okusha, ukulungiswa kabusha noma ukusebenza.
Uma ubamba iqhaza elikhulu ekuhleleni amachibi okubhukuda, ukuklama, ukwakhiwa noma ukusebenza, futhi ufuna ukusiza ukusebenzisa imikhiqizo yethu nobuchwepheshe ezindaweni ezisendaweni yangakini, sicela usithinte ngokushesha.
Ake sisize ukucushwa kwemishini yakho ye-pool!
I-Infinity Edge Swimming Pool, Isevisi ye-Swimming Pool, Isixazululo se-Outdoor Swimming Pool, Isixazululo sePublic Swimming Pool, Inkampani ye-Swimming Pool, Iphrojekthi Yephuli Yokubhukuda,